Hogganoonni ABO Mana Hidhaa Keeysatti Wallaansa Dhoorkamanii Dhukkubaan Dararamaa Jiran. | OROMSIIS OROMO
Qondaalota ABO hidhaa siyaasaa hidhamanii jiran keessaa, Obbo Kennasaa Ayyaanaafi Obbo Mikaa’el Booran dhukkubsachuun yaala ittifamanii haala Yaaddessaa keessa jiraachuu Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo beeksise.
Abukaatoon hidhamtoota Siyaasaa Oromoo OMN dubbise kun, dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo Mana Murtii Sabbataatti dhimmisaanii hordofamaa jiruufi waajjira Poolisii magaala Galaanitti hidhamanii jiranii keessaa kan hidhamtoota ja’a (6) ilaalchisuun addatti OMN’iif yaada kennee jira.
Qondaaltota Adda Biliisummaa Oromoo Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Kennasaa Ayyaanaa fi Mikaayel Booran dabalatee kaadhimamaa PHD Abdujabar Umar fi barataa Obsaa Abdiisaa dhimmi isaanii har’a waaree booda Mana Murtiitti ilaalamuuf beellama qabaachuus hima.
Namoonni kunniin ajjeefamuu Artist Hacaaluu Hundeessaa booda Waxabajji 25.2020 kan hidhaman ta’uu yaadachiisee, hidhamtootni kun tibba duraa Koomishiinii poolisii Oromiyaa fi Federaalaatiin to’atamanii Mana hidhaa Bilxiginnaa kan Naannoo Yuunvarsiitii Siddist Kiiloo jiru keessa tursiifamuu maatii wabeeffachuun gabaasaa turree jirra.
Deddeebii mana murtii Sulultaafi Sabbataa booda, manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhimmicha ilaaluudhaan Sadaasa 16. 2013 Obbo Daawit Abdataafi Obbo Lammii Beenyaa wabiin hiikamanii dhimma isaanii alarraa akka hordofan ajajee ture.
Bu’uruma sanaan Obbo Lammiifi Daawit hiikamanii dhimma isaanii hordofuuf mana murtii yeroo deemanitti, poolisii Hunma Addaatiin to’atamanii turan. Ergasii as hidhamtoonni kunniin magaalaa Sabbaataa mana hidhaa Daalattii keessatti hidhamanii kan jiran yoo ta’u, rakkoo nyaataafi kunuunsaatiin hedduu miidhamanii jiraachuu Abukaatoon isaanii OMN-tti himeera.
“Mootummaan nyaata isaaniif dhiheessaa hin jiru. Maatiinis akkasuma dhorkamaniiru. Obbo Lammiifi Dawiit rakkoo nyaataa hamaaf mana hidhaa Daaletti keessatti saaxilamaa jiru” jechuun himee, ergasii as Manni murtii himata shororkeessummaa Obbo Lammiifi Daawit irratti baname kuffisus, poolisiin ammallee ajaja fudhachuun isaan hin hiikne jedha Abukaatoon isaanii kun.
Gama biraatiin, Mana hidhaa Bilxiginnaa Oromiyaa keessaa baafamanii gara Waajjira Poolisii magaalaa Galaanitti kan dabarfaman, Obbo Mikaa’eel Booraniifi Kennasaa Ayyaanaa dhukkuba Sukkaaraafi Narviitiin baayyee rakkachamuufu waldhaansa fayyaa dhabuun haala Yaaddessaa keessa jiraachuu isaaniis Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun ni hima.
“Waajjirri Poolisii Aanaa Galaan namoota kana akka yaaluuf irra deddeebiin yoo gaafannu, yaala ga’a ta’e isaaniif dhiheessuu akka hin dandeenye dubbatee, Bakka waldhaansa ga’a argatanitti akka dabarfaman gaafannus ammoo ‘jarri kun adaraa nu bira ka’aman’ jechuun deebii nuuf laatu” kan jedhu Abukaatoon kun “Erga gara Galaanitti darfamanii ji’a tokkoo ol ta’anis hanga yoonaa mana Murtii Aanaa Galaanitti hin dhihaanne. Manni murtiis sababa Poolisiin jara kana dhiheessuu dideef poolisii gaafachuuf har’aatti beellama ni qaba” jechuun OMN-tti himaniiru.
Kanaan dura marsaa hedduudhaaf hidhamtoota kanaaf mirgi wabii eegamuufis, poolisiin mana hidhaa gegedderuun alatti, ajaja mana mirtii fudhachuuun hidhamtoota siyaasaa kana hin hiikin jira.